I-PlexEarth - i-Geofumadas
I-Plex.Earth Timeviews inikezela ochwepheshe be-AEC ngezithombe zakamuva ze-satellite ngaphakathi kwe-AutoCAD
I-Plexscape, abathuthukisi bePlex.Earth ®, elinye lamathuluzi athandwa kakhulu e-AutoCAD ekusheshisweni kwemisebenzi yokwakha, yobunjiniyela nokwakha (AEC), yethule i-Timeviews ™, insizakalo eyingqayizivele emakethe ye-AEC yomhlaba wonke, eyenza Izithombe ze-satellite ezivuselelwa kakhulu ezingabizi futhi zitholakala kalula ngaphakathi kwe-AutoCAD. Ngemuva kokubambisana kwamasu ...
Izikhathi zokubuka - I-Plugin ukuze ifinyelele izithombe zomlando zesathelayithi nge-AutoCAD
Izikhathi zokubuka yisikhathi i-plugin ethakazelisayo kakhulu evumela ukuthi kufinyeleleke emifanekisweni ye-satellite yomlando kusuka ku-AutoCAD, ngezinsuku ezahlukene nezinqumo. Nginomfanekiso we-digital contour engiwulandile kusuka ku-Google Earth, manje ngifuna ukubona izithombe zomlando zalendawo. I-1. Khetha indawo enentshisekelo. Inqubo ilula. I ...
Izinga lezinga kusuka ku-Google Earth - ezinyathelweni ze-3
Lesi sihloko sichaza indlela yokwenza ama-contours ngokusekelwe kumodeli ye-Google Earth digital. Kulokhu sizosebenzisa i-plugin ye-AutoCAD. Isinyathelo 1. Bonisa indawo lapho sifuna ukuthola khona imodeli ye-Google Earth yedokhumenti. Isinyathelo 2. Ngenisa imodeli yedijithali. Usebenzisa i-AutoCAD, ube ne-Plex.Earth add-ins efakwe. Ngokuyisisekelo, ...
I-Transoft Solutions ne-Plexscape benza ukusebenzisana ukuze banikeze ukumelela okungokoqobo kwezimoto ze-3D ku-Google Earth
Transoft Solutions Inc., umholi wezwe software design kanye nokuhlaziywa zokuthutha ubunjiniyela, kuye kwahlotshaniswa Plexscape, Plex.Earth® onjiniyela, lamathuluzi ezidume kakhulu AutoCAD for ukusheshisa lathumela, nokwakha (AEC). A element central yobudlelwane kwaba ukuhlanganiswa ubuchwepheshe AutoTURN® ...
Ngivame ukubona imibuzo efanayo kumagama angukhiye abasebenzisi abafika ngayo kuma-Geofumadas kusukela ku-Google search engine. Ngingabhalisa ngisebenzisa i-Google Earth? Imifanekiso enembile kangakanani ku-Google Earth? Kungani inhlolovo yami ihambile ngokuphathelene neGoogle Earth? Ngaphambi kokuba ngithole isigwebo sokuthi ...
-Google Earth 7 catch imikhawulo Ortho izithombe kuyalungiswa
Lapho sebezohamba inguqulo entsha yama Plex.Earth 3, siyaqaphela ukuthi nakuba amabhere umthwalo amasevisi amasevisi wewebhu ibalazwe, inzuzo enkulu ukuthi bekulokhu kude kangaka bakwazi ukulanda-Google image orthorectified Earth ... ke ngeke kube lula. Lokhu kungenxa ku-Google, efuna ukugwema ...
I-AutoCAD 2013 PlexEarth
Imisebenzi ye-Plex.Earth 3.0 ye-Load WMS kusuka ku-AutoCAD
I-Plex.Earth 3.0, enganginesikhathi sokuzama ngenkathi ngichaza usuku lokutholakala ngenguqulo ecacile, ifikile kimi. Kungenzeka ngenyanga kaNovemba ka-2012. Qalisa nge-AutoCAD 2013 Mhlawumbe inoveli iningi, ukuthi le nguqulo yenzelwe ngokuqondile i-AutoCAD 2013, noma yimuphi ...
I-AutoCAD 2013 Google Earth PlexEarth
Amasistimu aqondisa i-UTM aboniswe ku-Google Maps
Akubonakali, kepha imithombo ukuthi i-PlexScape Web Services ihlelwe ukuguqula izixhumanisi nokuzibona ngeso lengqondo ku-Google Amamephu kuyisenzo esithakazelisayo sokuqonda ukuthi izinhlelo zokuxhumanisa zezifunda ezahlukene zomhlaba zisebenza kanjani. Kulokhu, kukhethwe kusuka kuphaneli ebonisa izinhlelo zokuxhumanisa, izwe bese ...
Buka izixhumanisi ze-UTM ku-Google Amamephu, bese usebenzisa NOMA! Okunye uhlelo lokuxhumanisa
Kuze kube manje bekujwayelekile ukuthi ubone i-UTM kanye nezixhumanisi zendawo ku-Google Maps. Kodwa ngokuvamile ukugcina i-datum i-Google isekela, okuyi-WGS84. Kodwa: Kuthiwani uma sifuna ukubona ku-Google Maps, ukuhlanganiswa kwe-Colombia ku-MAGNA-SIRGAS, i-WGS72 noma i-PSAD69? Ukuhlanganiswa kweSpain ku-ETRF89, i-Madrid 1870 noma i-REGCAN 95? ...
Cartografia, Innovations, kokuqala
Plex.Earth thwebula izithombe kusuka ku-Google Earth Ingabe ezingekho emthethweni?
Sivele sibone ezinye izinhlelo ezilandile izithombe kusuka ku-Google Earth. I-Georeferenced noma cha, ezinye azikho njengeStchMaps ne-GoogleMaps Downloader. Ngolunye usuku umngane wangicela ukuthi ngabe i-Plex.Earth yenza ku-AutoCAD iphula izinqubomgomo ze-Google. Yimaphi imigomo ye-Google http://earth.google.com/intl/en/license.html (c) ...
I-Plex.Earth, isibonelo esihle sokungena emakethe yaseSpanishi
Ngolunye usuku kuye kwakhishwa inguqulo yeSpain yekhasi le-PlexScape, elingenalo uhlelo lwayo lokuqala lwesiGreki futhi likhona ngesiNgisi nangesiFulentshi. Kubonakala ngathi isibonakaliso esibalulekile, esibone ngaso izibonakaliso kusuka ngaphambili, kusukela ku-Plex.Eminyaka ngaphakathi kwezilimi zayo ezingaphezu kwe-10 kakade ifakiwe iSpanishi inguqulo ye-2.0 ...
-Google Earth / Amamephu, Innovations
I-Geofumadas ... 2 wikileaks ngaphambi kokuphela kwe-2011
Ezinsukwini ezintathu kuphela ngaphambi kokuba i-2011 iqedile, ngigunyaziwe ukuxhumana okungenani lezi zinsuku ezimbili ezizoshintsha ukuphila kwethu ku-2012: 1. I-Microsoft ithenga ama-Bentley Systems. Njengoba ungakuzwa, iMicrosoft ifinyelele isivumelwano sokugcina sokuthola umgogodla weBentley Systems ofezwe kwi-Bentley Infrastructure 500; inombolo ...
I-AutoCAD-AutoDesk, -Google Earth / Amamephu, Microstation-Bentley, egeomates yami
Okuthunyelwe kusuka ezinyangeni ezingaphezulu kwe-50
Ngemva kokubhala izinyanga ezingaphezulu kwe-50, lokhu kuyisifinyeto. Ekuboneni kokuqala, nakuba ukukhetha kuye kusekelwe ekubukeni kwekhasi, i-X-ray yile: 13 ihlobene ne-AutoCAD noma izinhlelo zayo eziqondile. Isihloko esiye sigxilile, phakathi kwezingoma ezintsha zezinguqulo ezintsha, ukusetshenziswa okusebenzayo ne-Civil ...
Okufakiwe, INDEX, egeomates yami
Yenza i-Google Earth Curves nge-AutoCAD
Esikhathini esithile esidlule ngikhuluma nge-Plex.Earth Tools ye-AutoCAD, ithuluzi elithakazelisayo elingaphandle kokungeniswa, ukudala izithombe ze-georeferenced images nokugcizelela ngokucacile, ungenza futhi imizila eminingi ejwayelekile endaweni yokudweba. Lesi sikhathi ngifuna ukukhombisa isizukulwane semikhawulo evela ku-Google Earth. Mhlawumbe iqiniso ...
I-AutoCAD-AutoDesk, Okufakiwe, -Google Earth / Amamephu, topografia
PlexEarth, okuletha 2.5 inguqulo ye-Google Earth izithombe
Ngiye ngicwiliswa izici ukuthi i-version entsha ye-PlexEarth iletha, okulindeleke ukuthi kumenyezelwe ekupheleni kuka-Okthoba ka-2011. Isizathu esiyinhloko esenza leli thuluzi liye lamukelwa kakhulu ukuthi lixazulula lokho uhlelo oludume kakhulu lwe-CAD (AutoCAD) nezwe elingenakukwenza ...
I-AutoCAD 2012 3D civil Google Earth PlexEarth
I-AutoCAD-AutoDesk, -Google Earth / Amamephu, Innovations
Ngenisa izithombe nomodeli we-3D kusuka ku-Google Earth
I-Microstation, kusukela ku-8.9 (XM) version inikeza uchungechunge lwezinhlelo zokusebenza zokuxhumana ne-Google Earth. Kulokhu ngifuna ukubhekisela kokungeniswa kwefomethi yesithathu nesithombe sayo, okufana nalokho okushiwo yi-AutoCAD Civil 3D. Le misebenzi ivuliwe ngokwenza: Amathuluzi> indawo yokuhlala noma uma kwenzeka Microstation ...
-Google Earth / Amamephu, Microstation-Bentley, topografia
Iyatholakala Beta Amathuluzi 2.0 PlexEarth
A usuku edlule ngixoxa emisha esingaletha 2.0 nguqulo ye PlexEarth Amathuluzi AutoCAD, omunye ngentuthuko esiwusizo kakhulu Sengike ngakubona ku-Google Earth ilungu Autodesk Unjiniyela Network (ADN). Namuhla ukhululiwe version Beta, ungalanda, ukuhlolwa kanye ukuthi kubaluleke ...
Autodesk 3D civil DWG Google Earth PlexEarth
I-AutoCAD-AutoDesk, -Google Earth / Amamephu, Ividiyo